Kudzvanywa kweCache: gonesa yako RAM kuita paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kudzvanywa kweCache: gadziridza mashandiro eLinux
Kudzvanywa kweCache inogona kutibatsira kuvandudza mashandiro eedu GNU Linux kugovera. NeCache Pressure isu tinokwanisa kukwidziridza yedu RAM ndangariro, nekuti nesarudzo iyi tinogona kugadzirisa nzira iyo iyo kernel inounza mabhureki e data mune huru memory. Ramba uchifunga kuti isu tinogona kuita chiuru zvinhu kugadzirisa yedu kernel uye yedu system kuti zvirinani kuchinjika kuchikwata.
Apple inopa Hardware uye softwareNaizvozvo, iyo inoshanda sisitimu yakanyatsogadziriswa kune yakadaro Hardware. Pane kupokana, isu tinoona kuti mamwe masisitimu akadai seLinux kana Android distros anofanirwa kushanda mune yakawanda yemahara Hardware musanganiswa ayo iwo asina kugadzirirwa, zvisinei iwo anoshanda nemazvo uye dzimwe nguva kunyange zvirinani kupfuura iOS kana Mac OS X mune mamwe mabasa akasarudzika. Izvi zvinoitikawo neOS X patinoedza kuiisa paPC, tichava tasimbisa kuti hazviendi sezvazvingaita pamushini weMac ...
Zvakanaka, paLinux tinogona kushandisa kuwanda kwesarudzo kuvandudza mashandiro. Kuchinjika kwayo kunotibvumidza kuti tiwedzere kune iyo yepamusoro uye sarudzo dzakakura kwazvo zvekuti zvinonetsa kunyora zvese. Tinogona kushandisa kumisikidzwa kweSwappines, kubvisa zvisina kufanira kernel module, ita yakadzika kernel kumisikidza kuiisa zvakachena, kudhonza mafaira, nezvimwe.
Mumwe wavo ndiye watinopa pano, Cache Pressure. Kana tikaita shanduko diki diki, isu tichaona kuvandudzwa kwekuita kana uchishandisa zvirongwa, kushanda kwezuva nezuva kwehurongwa, kana kuvhura mavhidhiyo kana zvemultimedia zvemukati. Kudzvanywa kweCache kunounza nekutadza kukosha zana, uye inogona kusiyaniswa pakati pe100 ne0, saka ndiyo nhamba yepamusoro. Izvi zvinoreva kuti iyo kernel inofambisa yakawanda data iyo isiri kuzoshandiswa nekukasira. kubva pa RAM kuenda ku hard disk SWAP partition.
Kana iwe uine yakawanda RAM, 16GB kana kupfuura, unogona kusarudza kuisa nhamba padhuze ne100 kana kusiya iyo default kukosha, asi kana iwe usina yakawanda (<4GB), pamwe yakadai nhamba yakakura yaizoita iyo RAM yakabatikana ... Tichaedza nekukosha kwemakumi mashanu seizvi:
Saka tinoisa kukosha makumi mashanu nemutsara wekutanga uye tinokwanisa kuyedza kana mashandiro avandudzika (anovhura mavhidhiyo, kunyorera, nezvimwewo), kana zvirizvo, tinozviita zvechigarire na:
Uye isu tinogadzira mutsara unowedzera kumagumo:
Isu tinochengetedza shanduko uye izvozvi unogona kutarisa shanduko ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Kudzvanywa kweCache: gadziridza mashandiro eLinux
Mhoro, unobatsira kwazvo! Iwe unogona here kuve nerumwe rudzi rwehukama hwakapindirana, senge chengetedzo kana kuita kwekutadza mune mamwe mabasa?
Mhoro, nei uchibvunza? Nekuda kwekurangarira ndangariro, nekuda kwe…?
Handizive, dzimwe nguva rudzi urwu rwechinhu runogona kuve nemhedzisiro.
Ini ndatova nayo inomhanya uye iri kufamba mushe, ndatenda nekugovana :)
Izvi zvinonakidza. Izvo zvandisinganyatso kujekesa iko kubatsirwa mukuita mumashini madiki uye mune yakakwana kana yakawandisa michina.
Ini ndinoshandisa Ubuntu 14.04, ndine 8GB ye RAM uye ndakachengetera 2GB yeSWAP. Iyo sisitimu yakaiswa pane SSD, asi ini ndakasiya iyo SWAP pane iyo HDD (ndinozvidemba izvi nekuti, nekushoma kwayo kwainoshanda, ingadai yakaramba iri paSSD; mune inotevera kuisirwa, icharamba iri muSSD) . Iwo echinguvana ini andinotumira kune RAM.
Ini ndanga ndagara ndanzwa nezvekugadzirisa iyo Cache Pressure yemashini madiki, kazhinji ine kukosha kwe makumi mashanu, asi ini ndakanga ndisina kuverenga chero chinhu nezve kuzviita pane mamwe kana mashoma masimba michina. Uye ndine mibvunzo mitatu, kana iwe ukanditendera:
Zvinogona here kunyatsokurudzirwa kuzviita pamushini une simba?
Inonyanya kubatsira here kumashini madiki?
Chii chinogona kuongororwa kuti uone zvine mutsindo pane iko kugadzirisa kana kukuvara kuri?
Iyo SWAP pane iyo SSD iri nani kwazvo hongu ...
Kana kuri kusahadzika kwako, yaive yekukanganisa kunyora kwangu. Yakagadziriswa.
Kumubvunzo wako 1: Hazvingaite zvine musoro kana uine RAM yakawanda.
Kumubvunzo wako 2: Ehe, nekuti unodzivirira kurodha yakawanda isina basa data uye uchisiya nzvimbo yezvinonyanya kudiwa nguva dzose ...
Kumubvunzo wako 3: Unogona kuita bvunzo nemuchina uine mashoma zviwanikwa zvine default kukosha uye wozvishandura kuti uone mutsauko, semuenzaniso nekupimisa nguva yekukanda kwechikumbiro, kuvhurwa kwemafaira emultimedia, nezvimwe.
Ikozvino zvava kujekesa kwandiri, zvaitaridzika kwandiri kuti mumushini wazvino, wakashongedzerwa ne RAM, haifanire kuita zvine musoro.
Ndine laptop ine limited micro uye RAM inova ndiyo yakanaka michina yekuiyedza.
Ndichangopedza kunyora yapfuura komendi ndakazvitarisa palaptop uye, kushamisika, ndanga ndatozviita
Uye zvino ndinorangarira. Ini ndanga ndambo tarisa pane inotevera Ubuntu León blog post:
Uye ini ndaisa shanduko. Mune iyo laputopu yore ini ndine Xubuntu 14.04 pamwe nekugadziridzwa kunoratidzwa mune iyo posvo uye hazvikanganike. Dambudziko guru randiinaro nderekuti Chrome ine tsika yekugwamba, dhisiki rinotanga kunyora kunge rinopenga nezvinhu zvipi uye rinokiya komputa, hapana nzira. Firefox yanga iri nani, asi zvakadaro ndakabvisa cache cache uye chimwe chinhu chave nani, asi muChrome hazvigone kuitwa, handizive kuzviita, zvirinani.
Ehe, Chrome ine nzara isinganzwisisike ye RAM uye izvi zvinorwadza akadaro RAM ane nzara zvirongwa.
Chinyorwa ichi chinonakidza kwazvo, chinoshanda, ndiri kuenda kunoedza palaptop yangu, iine 4Gb ye RAM, uye 64 Gb SDD disk.Ndinongova nekusahadzika kumwe chete, izvi hazvikanganise hupenyu hunobatsira hweSDD disk, zvinoita kwete kuwandisa zvinonyorwa muSAPAP?, Ini ndinobvunza izvi nekuti pandakaisa iyi diski, ndakaverenga akati wandei ezvidzidzo uye maforamu ekuzvigadzirisa muLinux, (anga ari makore maviri apfuura), uye mune mamwe vakatokurudzira kuti vasashandise SWAP. Asi ini zvakare ndinonzwisisa kuti neshanduro dzazvino dzekernel uye zvakajairika mune dzazvino distros, Trim uye zvinhu zvakasiyana siyana zvangoerekana zvangoenderana nharaunda ine SDD disks, uye madhiki pachawo anounza zvirinani kutonga mukati, mumwe munhu anoziva nyaya anogona kunditsanangudza zvatiri parizvino.
Ini ndanga ndambopindura, asi sezvo ini ndisiri kuona chirevo, ndinopindura zvakare. Ndokunge, kana iwe ukaona kuti maviri makomendi angu achioneka achitaura zvimwe kana zvishoma zvakafanana, zvichave nekuda kweizvozvo.
Chinhu ndechekuti, ini ndinofunga kuti nhasi zvakakwana zvinozivikanwa nezve maSSDs kuti vasazvidya moyo nezvezvinonyorwa zvinogona kuitwa neSAPAP. Ndokunge, bvunzo dzechokwadi dzakaitwa, kusimbisa maSDD kune zvakanyanyisa izvo vashandisi zvakajairika zvaisazosvika mumakore mazhinji, kunyangwe zviome sei zvatakazvipa. Unogona kuverenga nezvazvo apa, semuenzaniso:
Ive nekuchenjerera, bvunzo idzi dzinoreva madhisiki eazvino, aine ekare mamodheru andaigona kukuudza. Asi tichitarisa mhedzisiro, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti chero yazvino diski yaizogara kwenguva yakareba kupfuura zvaizotora kuchinja makomputa.
Pandakaita kuisirwa kwangu kwazvino (kwaive pakati pegore rapfuura, kwete kare kare) ruzivo rwuripo rwaive rwusina kujeka uye munhu wese aishushikana nekuderedza kunyorera kune SSD zvakanyanya sezvinobvira, asi ikozvino zvave kuzivikanwa kuti hapana chikonzero chekufungisisa pamusoro pazvo. Muchokwadi, ini ndiri kunyatsofunga kufunga kuchinja yangu SWAP kune iyo SSD; Ndanga ndichiverenga nezvazvo uye zvinoita sekusanyanya kuoma, asi ini ndinoona kuti havazi vese vanozviita zvakafanana, handizive kuti ndeipi nzira ichave iri nani, semuenzaniso:
Saka ndinotora mukana uno kukutendai nerubatsiro neizvi pamberi.
Mhoroi, izvi zvine chero zvinopesana here kana zvine zvazvinoita neimwe nzira kana iwe uchinge uchinge uine yakaderera kukosha yakapihwa iyo vm.
Ini parizvino ndine kukosha kwegumi yakapihwa yakanzi kernel kusiyanisa uye mashandiro acho akanaka. Ini handizive kana kugadzirisa cache_pressure kuchaburitsa chimwe chinhu kana ini ndichizokwanisa kusvina zvishoma muchina wangu.
Ndakaverenga nguva pfupi yadarika kuti bvunzo chaidzo dzakaitwa nekushandiswa kwemadhisiki eSSDD, achivaisa pakunyanyisa zvekuti hapana mushandisi wePC achasvika, zvisinei nekuti tinoishandisa zvakadii zuva nezuva, uye mhedzisiro yavakatora ndeyekuti ivo vakazove vanodzivirira zvakanyanya kupfuura zvavaitenda kare. Nhau mune izvi ndeye inotevera:
Sezvo zvinoita sekunge ivo vanoramba zvakanyanya kupfuura zvaitendwa (uye ini ndine SAMSUNG 840 PRO, inobuda mushe mushe pakuyedza), ndinofunga zvakanakisa kunyatsoita iwo, uye kushandisa kumhanyisa kwema disc aya kuti iyo SWAP haisi mutoro inoratidzika kunge zano rakanaka kwandiri (hongu, kuziva izvi).
Ehezve, panguva yandakaita kumisikidza yandinayo izvozvi, munhu wese akakurudzira kuvabata zvine hungwaru uye kudzikisira zvinonyorwa kusvika pakakwirira, asi handifunge kuti izvo zvinodikanwa nekuda kweiyi data, asi zvinopesana, zvinonzi , zviri nani kutora mukana wavo.
Chokwadi, kumisikidza kunotevera kwandinoita (16.04 kana zvese zvikafamba zvakanaka) ichave neiyo SWAP pane iyo SSD, asi ndiri kutofunga kuifambisa, nekuti ndanga ndichiverenga kutenderedza kuzviita uye haina zvinoita kunge zvakanyanyisa kuoma, kunyange ini ndaona nzira dzakasiyana dzekuzviita uye handizive kuti yakanaka ndeipi, semuenzaniso:
Ini ndinotora mukana uno kukutendai nezano pamberi peizvi, kana mukanditendera.
Ndiregererei nekutaura kwakawanda.
Ivo havana kunyatso kuoneka uye ikozvino vese vanobuda kamwechete.
Hapana chinoitika VaPaquito. Nezve chinhu chekupedzisira chaunotaura, ichokwadi kuti maSDD achangoburwa haana kukanganiswa zvakanyanya nenhamba yepamusoro yekunyora, zvisinei kana zvasvika kune maSSD disks zvinotaurwa nezvazvo zvese kwete izvo zviripo chete Ini ndinoshandisa SSD diski asi ndeyechinyakare uye ini handidi kuyedza kana ichirwisa kana kwete nekuda kwekutyora, asi zvikasadaro inoshanda chaizvo uye yaive yakachipa. Kunyangwe ma disc aripo, pane mamwe asingapesane nevakawanda vanonyora. Naizvozvo, kumakesi akaita seako, zvirinani kuti iwe usarudze yako uye nekuyambira kunyevera nezvekushandisa zvisirizvo sezvo kuchine akawanda matsva munyika yeGnu / Linux.
Kwaziwai uye taura uye nyora zvese zvaunoda;)
Ndosaka ndakatotaura kuti bvunzo iri kubvunzwa inoreva marekodhi azvino uye Muy Computer inoita kunge ini saiti yakakomba, isingawanzoburitsa zvinhu zvishoma. Yangu, muchokwadi, iri SAMSING 840 PRO, iyo inobuda chaizvo mumuedzo. Yakanga isiri yakachipa zvakanyanya, chaiyo euro imwe paGG, asi ini ndinofunga yaive imwe yemari dzakanakisa dzandakaita.
Zviripachena, neakura kana akaderera emhando dhisiki iwe uchatofanira kufunga nezvazvo zvakanyanya, asi zvinoenderana nedhata iri kuve rinozivikanwa, zvinoita sekuwedzera kuchena kuti ivo vanodzivirira kupfuura zvavaimbotenda kare.
Paquito Turriano akadaro
Izvo hazvishande kwandiri :-(
[sudo] password ye turriano:
sudo: gedit: raira haina kuwanikwa
sudo: gedit / etc / sysctl.conf: raira haina kuwanikwa
Pindura Paquito Turriano
Tsananguro yaunopa yezve cache yekumanikidza inoita lousy. Kunyangwe iwe uchizvitsanangura iwe zvakashata zvakanyanya kana iwe usingazive izvo cache yekumanikidza inoita.
Isa Chromium OS pane pc yako neCloudready